septembre 2018 · déliremadagascar
Tanjona amin’ity taona 2018 ity ny fandriam-pahalemana ifotony mipaka amin’ny vahoaka. Nisafidy ny hihaona amin’ny mpanao gazety isaky ny telo volana ny eo anivon’ny sekreteriam-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena mba hampahafantatra amin’ny vahoaka ny asa vitan’ity ratsa-mangaika mitandro ny fandriampahalemana ity. Continuer la lecture →
Socio-eco	 27 septembre 2018 lynda
GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR: Manolotra zava-baovao ho an’ny mpitsidika
Sehatra iray ahafahana mivarotra entana haingana sy mampiodina ny vola ampiasaina ny hetsika ara-barotra. Natao hampivondronana ireo mpivarotra entana isan-karazany, orinasa madinika sy salantsalany ary vaventy mba hanatonana akaiky ny mpanjifa ihany koa. Continuer la lecture →
VATSIM-PIANARANA MANKANY « GRANDE BRETAGNE » : Manomboka ny fandefasana dosie
Feno 200 taona ny fiarahamiasan’i Madagasikara sy i Grande Bretagne. Ho fanamafisana hatrany izany fiarahamiasa izany dia manana anjara amin’ny vatsim-pianarana « chevening » ahafahana mianatra any amin’ireo oniversite britanika ny Malagasy. Continuer la lecture →
FAHAVALO: Sarimihetsika mitantara ny hita sy re nandritra ny tabataba 1947
Dimy taona no nanatontosan’i Marie-Clémence Andriamonta-Paes ny horonantsary fanadihadiana “Fahavalo – Madagasikara 1947. Continuer la lecture →
Socio-eco	 26 septembre 2018 R Nirina
« MADAGASCAR FASHION WEEK OCÉAN INDIEN »: Hetsika ara-tsosialy ny ao ambadikany
“Izay tombony azo amin’ity “festival Madagascar fashion Week Océan Indien”, andiany faha-4 ity dia entina hiantohana ny fitaovam-pianaran’ireo ankizy any Beroroha, Toliara II, Sainte-Marie, Mananjary”, hoy ny filoha mpanorina ny hetsika, Alexandre Rakotoson. Continuer la lecture →
« SALON DE LA GASTRONOMIE »: Hampiofana maimaim-poana momba ny fandrahoan-tsakafo
Hetsika natao hankalazana ny sakafo sy ny manodidina azy ny « salon de la gastronomie », araka ny fanazavan’ny tale jeneraly lefitry ny « Alliance française Tananarive » (AFT), Rindra Dupré. Continuer la lecture →
TSENABEN’NY VATOSOA SY NY FIRAVAKA: Hisarika ny mason’izao tontolo izao
Nanasa ireo mpandraharaha momba ny vatosoa sy firavaka avy any ivelany ny mpikarakara ny “tsenabe iraisam-pirenena momba ny vatosoa sy ny firavaka eto Madagasikara”. Continuer la lecture →
Socio-eco	 25 septembre 2018 lynda
SPOKEN ENGLISH COURSE: Mihena 50 % ny saram-pianarana
Manome tolotra manokana ho an’ireo mpianatra avy nanala fanadinana bakalorea tamin’ny herinandro lasa teo ny Spoken English Course. Continuer la lecture →
politique	 24 septembre 2018 R Nirina
KANDIDA MAILHOL: Misy mikasa hamono
Tratran’ny ramatahora sahady ny kandida Mailhol noho ny fitakiany ny « Iles Eparses ». Misy mifofo ny ainy ankehitriny. « Tsy hihemotra amin’ny fampitahorana ataon’ny any ivelany aho. Andriamanitra irery ihany no hatahoraka ary tsy misy maty tsy amin’ny androny izany eto. Ampiasaina ny teratany Malagasy hanao izany fa tsy ny any ivelany no hanao mivantana izany», hoy ny kandida Mailhol laharana faha – 34.
Tsy izany teti-dratsy faratampony izany ihany anefa fa misy mikasa hisambotra ka hampiditra am-ponja koa izy. Eo ihany koa ny fisian’ireo olona voakarama mba ho « disqualifié » izy. Anisany fampitahorana azy tsy hitaky ny « Iles Eparses » ny fisamborana ireo teratany afrikana roa izany nitaky niaraka aminy ny famerenan’ny Frantsay ireo nosy kely manodidina an’i Madagasikara. Nomarihany fa tsy hiady amin’ny vahiny izy fa mitaky kosa ny hameranana io « Iles Eparses » io. Nanao antso avo ho an’ireo izay manao izany izy mba hampiato ireo fikasa-dratsy ireo.
Manaiky ny vahoaka
Fihaonana voalohany nataon’ny kandida Mailhol tamin’ny vahoakan’Antananarivo ny teny amin’ny kianja fanaovana basikety Mahamasina ny Sabotsy 22 Sebtambra 2018 lasa teo. Naseho an’ireo olona maro be tonga teny an-toerana ireo taratasy 1.000.000 vita sonian’ireo vahoaka Malagasy momba ny tsy maintsy hamerenan’ny Frantsay ny « Iles Eparses ». Noamafisiny fa tsy maintsy miverina amin’ny Malagasy ny tany izay nalaina amin’ny tsy rariny anisan’izany ny tany lasan’ny vahiny any Atsimo.
« Tsy ny mpino apokalypsy irery ihany no ho vonjena fa ny vahoaka malagasy tsy an-kanavaka. Misy koa ny milaza fa mpino ao aminy ihany no mpanaraka ahy ». Iaraha mahalala fa manaja ny andro sabata ny pasitera Mailhol sy ny mpino ao aminy. Misy ny nanome tsiny azy amin’izao famoriana olona amin’ny andro sabata izao. Nisy mihitsy aza no nilaza fa nivadika izy. Noporofon’ity kandida laharana faha-34 tamin’io andro sabata io fa ireo olona maro be tonga namaly ny antsony dia tsy apokalypsy satria tsy tonga teny ireo mpino ireo noho ny andro sabata. Nampiseho ihany koa izy fa filoha ho an’ny Malagasy rehetra fa tsy an’ny apokalypsy irery akory.
Tsy miova ny vinan’ny kandida Mailhol izay sady laharam-pahamena rehefa tonga eo amin’ny fitondrana. Eo ny fijerena ity tsy fandriam-pahalemana mampikaikaika ny vahoaka ity, ny famerenana ny tany azon’ny vahiny na teratany Malagasy amin’ny tsy rariny ao anatin’izany ny « Iles Eparses » ary fijerena manokana ny farim-piainan’ny vahoaka amin’izao fidim-piainana miakatra izao.
Socio-eco	 22 septembre 2018 lynda
MADAGASCAR FASHION WEEK OCÉAN INDIEN: Hampivoatra ny sehatry ny lamaody
Dimy andro be izao no atokana hampisehoana ny talentan’ireo tanora vao misandratra sy efa manana traikefa momba ny lamaody. Continuer la lecture →